Top 8 Asa mampidi-bola Asa Options amin'ny karama any India
Alohan'ny mitady ho an'ny asa, zavatra iray izay mihevitra ny olona rehetra amin'ny ankapobeny dia ny vola na ny karama. Eny, passion no mitondra ho amin'ny fahombiazana, fa amin'ny faran'ny andro, rehefa hiverina an-trano reraka, ny hany ilainao dia misy fampiononana sy lafo vidy. Noho izany, Tsy azo atao mihitsy tsara kokoa ny hametraka ny tanjonao amin'ny avo lehibe izay afaka manam-bola ny fitaovana rehetra ny fampiononana kely fa tsy mametraka tanjona. Misy asa sasany izay tonga miaraka be dia be ny perks miaraka amin'ny karamany. Following is a list of some of the top career options that would support you efficiently both financially and prestige wise.
Ao amin'ny raharaham-barotra amin'izao fotoana izao taranaka, avo laza efa miorina mafy ho an'ny olona amin'ny fitantanana sy ny fahaiza-manao multitasking. Tsy tena ankasitrahana dia amin'ny teny anivon'ny. Na izany aza, rehefa dingana ho amin'ny handray andraikitra ambony sy ny fanapahan-kevitra ireo dingana, ny karama dia mainka. Ianareo rehetra dia mitaky fitantanana mari-pahaizana fanta-daza avy amin'ny Institiota. Izao no mahazo vola amin'ny Filoha Tale Jeneraly amin'izao fotoana izao amin'ny ampahany. Ny orinasa ihany koa ny handeha hanome anao perks isan-karazany miaraka amin'ny karamany.
Doctors dia takiana amin'ny rehetra vonjy taitra karazana toe-javatra sy ny fahaiza-manao dia sarobidy eo amin'ny fiaraha-monina. Rehefa efa nahay Fitsaboana, afaka hialoha ho manomboka ny toeram-pitsaboana tsy miankina ihany ny fakan-kevitra izay saran'ny miakatra ho be vola. Maha-dokotera dia tsy ianao ihany no haka vola, fa mamaly soa anao koa amin'ny be laza eo amin'ny fiaraha-monina. Matihanina ara-pitsaboana isan-karazany dia ny sokajy, ohatra, mpitsabo nify, Mpitsabo maso sns.
IT dia miroborobo ny orinasa amin'izao fotoana izao. Amin'ny fanoloana teknolojia asa boky rehetra, IT vahaolana ao lehibe fangatahana. Misy be dia be ny fiankinan-doha eo amin'ny rindrambaiko sy ny solosaina mifototra fampiharana izany andro izany. Noho izany, be dia be ny fahafahana mahazo ny vongana vola.
Nanofa Accountancy sy CFAs
Accountancy dia singa manan-danja amin'ny isan-mafy. Mahazo vola betsaka araka izay mitaky tahaka ny iray amin'ireo zava-dehibe takiana amin'ny fikambanana. Hitandrina ny boky simba, Tatitry no takina sy ny ampahany lehibe amin'ny fandrindrana ny rafitra ara-bola isan-taona dia ny drafitra. Noho izany, Čas sy CFAs manana sehatra goavana ao amin'ny orinasa.
Business efaha no voaisy tombo-kase ao amin'ny toerana isan-karazany, izay no antony tsy dia mila ho an'ny mpandraharaha sy ny ara-dalàna ny olona mba manidina matetika. Izy ireo no vonona ny mandany vola be amin'ny sidina. Ny sehatry airline dia miroborobo amin'ny hafainganam-pandeha tsy mampino. Noho izany, mpanamory, sidina mpanompony, tany staff, hostesses rivotra sns ao fangatahana.
Fialam-boly dia orinasa izay teo an-tampon'ny, ary nandray anjara lehibe ho an'ny toekarena fifanarahana iray manontolo. Ny orinasa glamor mahavariana efaha amin'ny vola sy ny matihanina toy ny mpilalao, modely, mpanakanto goavana hanangonana harena fifanarahana afa-tsy ny anjara asan'izy ireo ao amin'ny orinasa amin'ny alalan'ny dokam-barotra. Raha vao nanao lalana ho an'ny tenany, ny lanitra no ny fari.
Amin'ny toe-javatra maro mbola miandry, mpisolovava ihany koa amin'ny be fangatahana. Lalàna dia saha izay raha misafidy ny tsara ary tsy hiala amin'ny lalana ny fitsipika, ianao farany nahazo na harena sy afa-po. Misy fotoana mety manaiky ho voafitaka ianareo. Ny fananana hiatrehana dia sarotra. Na izany aza, ianao hatao nomena tamim-boninahitra, tombontsoa sy ny vola tamin'ny faran'ny andro.
Fanatanjahan-tena dia tsy dite ho an'ny olona rehetra. Fa raha manan-talenta sy fahaiza-manao fanatanjahan-tena tsara hahazoana ny tsara sy ny amin'ny mbola kely, anao fotsiny mba hanao maha-ho anao any an-tsaha. Tsy asa mora, raha tsorina. fa, Rehefa manao ny maha any an-tsaha, mahazo vola ianao tsy avy amin'ny lalao no milalao fa tsy hanao dokam-barotra sy ny dokam-barotra. Izany koa dia mitarika ho amin'ny laza amin'ny fomba tsara indrindra.
Ny etsy ambony ireo an-tampon'ny 8 asa safidy izay voatahy ianao amin'ny karama be karama sy ny lazany tamin'izany andro izany. Na izany aza, be dia be ny asa mafy, fanoloran-tena sy manaraka ny lalana marina dia takiana.
« Happy Australia andro 2018 Wishes, Quotes, SMS, Messages, Images, Costumes
Taratasy ho tonian-dahatsoratra momba ny fitrandrahana ala olana ny rano mandritra ny fotoanan'ny orana »